भैँसी पालेर महिनामै ८ लाख कमाइ! :: सुजिता कार्की :: Setopati
भैँसी पालेर महिनामै ८ लाख कमाइ!
सागर राज तिमिल्सिना पोखरा, असोज २६
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका— १४, चाउथे नजिक विजयपुर खोलाको आडमा एक युवाले १६ रोपनी जग्गा लिजमा लिएका छन्। कतै गोठ बनाएका छन् त कतै खेतीबाली। २०७० सालदेखि एक युवाले व्यवसायिक रुपमा नै भैँसी पालिरहेका छन् । गोठमा झण्डै २ सय भैँसी छन् । पोखरा नयाँबजारका दिपक तिमिल्सिनाको यो परिवार भैँसीले धानेको छ ।
छोराछोरी पोखराका स्थापित बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् । ‘पैसा कमाउन न विदेश जानुपर्छ न जागिर खानुपर्छ, उनी भन्छन् । अरुलाई जागिर दिएर मज्जासँग सम्पत्ती जोड्न सकिन्छ।’ उनको फार्ममा २१ जना कामदारले काम गर्दै आएको तिमिल्सिनाले बताए ।
यसबाहेक उनले पोखरा १४ कै खाल्टेमसिनामा पनि १३ रोपनी जग्गा लिएर अर्को फार्म तयार गरिरहेका छन् । दुईवटा फार्ममा ४ सय भैँसी पुर्‍याउने योजना रहेको तिमिल्सिना बताउँछन्। ‘दुईवटा भैँसी घरमा दूध खानका लागि पालेका थिएँ। घरमा खाएर बचेको छिमेकीले लैजान थालेँ। पछि राम्रो दूध पाइने होहल्लाले वरिपरीका सबै दूध माग्न आए । हामीले पनि भैँसी बढाउँदै गयौँ।’ उनले भने। नजिकका छिमेकीलाई दिनकै लागि १२ वटासम्म भैँसी पालेको उनी सुनाउँछन्।
दूध बेच्नका लागि नयाँबजार, रत्नचोक, सभागृहचोक र बुद्धचोक गरी पोखराको ४ ठाउँमा जानकी एग्रो फार्मको नाममा डिलरहरू छन्। फार्ममा उत्पादित दूध डिलरमा ल्याएर प्रशोधन गरेपछि उपभोक्तालाई वितरण गरिने तिमिल्सिनाले बताए। फार्मबाट १ सय ८ रुपैयाँमा खरीद हुने दूध डिलरले उपभोक्तालाई १ सय २० रुपैयाँसम्म बेच्छन्। तिमिल्सिनाको गोठमा मुर्रा, गुजराती, पञ्जाबी क्रस र स्थानीय क्रस जातका भैँसीहरू छन्।
ती भैँसीहरू भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र नेपालका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही लगाएतका क्षेत्रबाट आयात हुन्छन्। एक सिजन दूध दिएपछि मासुका लागि भैँसी बच्ने गरेको उनले बताए । उनको गोठबाट दिनकै ८ सय लिटर हाराहारीमा दूध विक्री हुन्छ। ४ करोड रुपैयाँ लगानीमा सुरू गरिएको फार्मबाट महिनामा ८ देखि ९ लाख रुपैयाँ कमाइ हुने उनले बताए।
बैंकको व्याज घटाउँदा भने करीब ४ लाख रुपैयाँ हुने उनको भनाइ छ । ‘भैँसी पालेर स्थापित हुँला भन्ने सोचेकै थिईनँ। भैँसी पाल्ने योजना पनि थिएन, उत्सुक हुँदै उनले भने– नसोचेको पेशामा हात हालेँ । कमाइ पनि उस्तै छ। अहिले व्यवसायिक किसान बनेको छु।’ भैँसी पालेकै कारण उनले अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रदान गरेको युवा उद्यमी सम्मान समेत हात पारे। विदेश जाने युवाहरूलाई देशमै केही उद्यम गर्न उनको सुझाव छ।
कास्कीमा हाल ४५ हजारभन्दा बढी गाई छन् भने झण्डै १ लाख ४० हजार भैँसी छन् । उत्पादित दूधमध्ये ६० प्रतिशत भैँसी र ४० प्रतिशत गाईको छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज २६, २०७४, ०४:५३:१७